यो यस्तो परिवार जसका एकै कोखका ६ छोरी पीएचडी प्राप्त वैज्ञानिक भए : कोही अमेरिका, कोही अष्ट्रेलियाका सरकारी जागिरे « Etajakhabar
४, डा. नीतू दहिया : काइली छोरी नीतू अमेरिकामा खाद्य एवं औषधि विभागमा काम गर्छिन् । उनी पति सीए राहुल बोहरासँगै वाशिङ्गटन डीसीमा बस्दै आएकी छिन् । सन् २००६ मा, उनले अमेरिकामा सरकारी जागिर पाएकी हुन् । उनका पति राहुल उदयपुर, राजस्थानका हुन् ।
इजरायली र प्यालेस्टिनीबीचको यु’द्ध कहिले रोकिएला ?
महामारीले आक्रान्त बनाइरहेका बेला विध्वंश चक्रवातमा परी मुम्बइमा १२७ जना हराए, ७ तस्विरमा हेर्नुहोस